Beesha caalamka oo baaq u dirtay Hoggaanka Madasha Qaranka ee Soomaaliyeed | SAHAN ONLINE
Beesha caalamka oo baaq u dirtay Hoggaanka Madasha Qaranka ee Soomaaliyeed
NAIROBI – Ergooyinka beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed kasoo baxay ayaa fariin adag loogu diray shirka Hoggaanka madasha Qaran ee ka socda magaalada Muqdisho.
Warsaxaafadeedkan ayaa kasoo baxay Ergooyinka Qaramada Midoobey,Midowga Afrika,Midowga Yurub,Talyaaniga,sweden,Midowga boqortooyada iyo Mareykanka.
Beesha caalamka ayaa qoraalka kasoo baxay waxay ugu baaqeen Hoggaamiyaasha Madasha Qaran in ay qabtaan doorasho ku fadhida daah-furnaan,Isla-xisaabtan iyo sharci.
Waxay sheegtay beesha caalamku iney si dhaw ula socotay hawsha Guddiga Madaxa bannaan ee Xalinta Khilaafaadka iyo wararka la xiriira in wax Isdaba marin khatar ah ay dhacday mudadii lagu jiray hannaanka doorashada sia iyadoo la sameeyey Laaluush,cabsi galin,afduub iyo iyadoo lagu takri-falay qoondada loogu talagalay dumarka.
Sidoo kale ,waxay dalbadeen in sharaxaad laga bixiyo sida 24 kuris oo markii hore la galiyey in dib u eegis lagu sameeyo ay guddiga xalinta khilaafaadka ugu soo kooien 11-kursi.
Beesha caalamku ,waxay sheegtay in guddiga Xalinta Khilaafaadku ay mas’uul ka yihiin in ay soo bandhigaan xaqiiqda iyo sida looga saaray kuraasta qaarkood,qaarkoodna looga diiday liiska dib ugu celinta doorashada.
Xubnahan ayaa waxay kaloo xaqiijiyeen hoggaamiyaasha madasha qaran iyo Guddiga xalinta khilaafaadka kala aragti duwaanshiyahooda aanan la daa-rogin ay noqonayaan kuwa gundhig u nod go’aan ka gaarista natiijada doorashada ee waxba kama jiraan ku tilmaamay ee dib loogu noqonayo.
Warar ay helayso Sahan Online ayaa sheegaya in Hoggaamiyaasha madasha qaranka ay wax kama jiraan kasoo qaadeen 11-kursi oo guddiga khilaafaadku sheegeen in dib loogu noqonayo oo aan loo marin waddo sharci ah taasoo welwel gelisay beesha caalamka.